လူငယ်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ …အားလက်သီးနဲ့ ထိုး … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူငယ်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ …အားလက်သီးနဲ့ ထိုး …
လူငယ်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ …အားလက်သီးနဲ့ ထိုး …
Posted by fatty on Aug 9, 2010 in Myanma News, News |3comments
နိုင် ငံရေးပုဒ်မ ဖြင့်မတရား တရားစွဲခံထားရသူများ ….. နစ်နာသူ အလုပ်သမားများ ဘက်မှ လိုက်လံ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူ လူငယ် ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ သည် မကြာမီရက်ပိုင်းက
နေပြည်တော် အချို့ဝန်ကြီးများနေအိမ်တွင် လက်ခစား ဆေးသုပ်နေသောအလုပ်သမားများ သတ် မှတ်လုပ်ခမရရှိဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ရက်ချိန်းပေးကာ ယခုအထိ လုပ်အားခ မရရှိမှုအပေါ် လိုက်လံ ကူညီဆောင်ရွက်ရာမှ ….ကံထရိုက်တာများဘက်မှ ၀ိုင်းဝန်း ထိုးကြိတ် ခြင်းခံရကြောင်းသိရပါသည်။ ကံထရိုက်ယူထားသော ဆောက်လုပ်ေ၇း ကုမ္ပဏီမှာ
ဧဒင် ဆောက် လုပ် ရေး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကိုဖိုးဖြူ ဟာ လယ်သမားများ လယ်ယာမြေ မတရား သိမ်းဆည်းခံရမှုများကို လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးနေရာမှ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့
ILO မှ ကိုယ်စားလှယ်တဦး လာရောက်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရ်ျ မကြာမီလများ အတွင်းက ဘဲ ထောင်မှလွတ် လာသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဖိုးဖြူဟာ အလုပ်သမားသမ္မဂ တည်ထောင်ခွင့်ကို မှုးကြီး သန်းရွှေ ထံ မကြာမီက တင်သွင်း ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ မှ ခေါ်ယူကာ ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိကြောင်း နှင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါက အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း
ပြောကြားခံရပါတယ်။ ယခုတဖန် နေပြည်တော်ရှိ ၀န်ကြီးသုံးဦးအိမ်တွင် ဆေးသုပ် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားခ မရရှိဘဲ သုံးလ ဆက်တိုက် မှတ်ပုံတင်သိမ်းဆည်းခံထားရခြင်း။ ရက်ချိန်း အကြိမ်ကြိမ် ပေးပြီး ယခုထိ လုပ်အားခ မရှိသေးခြင်းကိစ္စများအပေါ် လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ အလုပ်သမားများ၏စာချုပ်တွင် ကံထရိုက်မှ လိပ်စာအမှန်ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိသည်ကိုတွေ့ရရ်ျ လိပ်စာမှန်အားလိုက်လံရှာဖွေရာ ကံထရိုက်၏ အိမ်အနီးတွင် ထိုး ကြိတ်မှုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကံထရိုက် မှာ ယခင် မဆလ ခေတ်က လူကြီး ဦးချစ်ခိုင်ဖြစ်ါတယ်။ ဧဒင် ဆောက်လုပ်ရး ကုမ္ပဏီပိုင် ရှင်ဖြစ်ပြီး ယခု ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် ဖွင့်ခွင့်လည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
The devil Junta is so evil the empire that no stone were left unturned to assure the 2010 election victory for fascist military Junta. It is the primary aim of Junta and they are doing to this end. This is the evidence that Junta is using hard-core criminals to bodily-harm and terrorize the oppressed and as it is mentioned here, Ko Hpoe Hpyu, the hero of people. They used moneys to appease the opposition, tripped the opponent to join the fake election and provided low-interest loans to poor peasants in return for agreeing to become the military party`s members. There isalife threatening danger for Ko Hpoe Hpyu and also for his survival, career prospect and professionalism. It is time to revolt/ up rise against this evil Junta using whatever resources available. The ethnic`s brothers are already armed themselves to match the brutality of fascist Junta. We the people must mobilise ourselves to boycott the election in unity. Some politicians have shamelessly accepted the bribe/ moneys from Junta and betrayed the people they should steadfastly serve. Some of them got frustrated with rules after rules of mother of unjust Junta and withdraw themselves from the election candidacy. For them it is wake up call for their mistake and all who had submitted to Junta`s election should leave the dirty contest as soon as possible. I have to call upon all people in Burma to boycott the election.